Garoonka magaalada Beledweyne oo qarka u saaran in uu xirmo – Hornafrik Media Network
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan saacadihii lasoo dhafay waxaa ka da’ay roob xoog leh oo socdaty saacado badan, kaa oo biyo dhiggay inta badan Jidadka iyo xaafaddaha magaalada.
Roobkaas ayaa saamayn ku yeeshay isu socodka bulshada reer Hiiraan, waxaana laga casi qabaa in uu saameeyo goobo badan oo muhiim ah, waxaana la soo sheegayaa in ay saakay gabi ahaanba joogsatay shaqadii garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne oo uu saamayn ku yeeshay roobkii da’ay .
Qaar ka mid ah shirkaddaha duulimaadka gudaha ayaa sheegay in maanta iyo maalmaha soo socdaba ay hakin doonaan duulimaadyadoodii magaalada Beledweyne, maadaama ay garoonka biyo fariisteen.
Xilli roobaad kasta magaalada Beledweyne waxaa xirma oo aan shaqeyn garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif, waxayna arintaas saamayn ku yeelataa dad badan oo aan gobolada kale ee dalka ugu bixi karin safar dhulka ah.
Inta badan dadka reer Beledweyne ayaa markii uu hakad galo garoonka Beledweyne waxay diyaarad u raad sadaan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ugu dhaw meel ay ka heli karaan diyaarad.
Cadaadiska dowladda ee Jubbaland ma xaq baa?